Danemark: Tsy manaiky ny “fampisehoana rohy lalina” ny mpamoaka gazety · Global Voices teny Malagasy
Danemark: Tsy manaiky ny “fampisehoana rohy lalina” ny mpamoaka gazety
Voadika ny 19 Avrily 2018 3:51 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Deutsch, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy nanaiky ny ezaka navaozin'ireo mpamoaka gazety Danoà mba hanakana ireo tranonkala toy ny Google News tsy hampiseho rohy any amin'ny lahatsoratry ny olon-tsotra afa-tsy amin'ny ny pejy fandraisan'ny gazety ihany ireo mpanao gazety bilaogera any Danemark. Antsoin'izy ireo hoe “fampisehoana rohy lalina” izany, ary izany indrindra no ataon'ny bilaogera matetika. Na inona na inona heverina ho fomba fanao mahazatra manerana izao tontolo izao, dia manizingizina ny Fikambanan'ny Mpamoaka Gazety Danoà fa rohy amin'ny pejy voalohany ihany no ilain'izy ireo, mba ahafahan'izy ireo mifehy tsara kokoa ny traikefan'ny mpiserasera.
Amin'ny ankapobeny, kivy ny Fikambanan'ny Mpamoaka Gazety Danoà satria te hampiditra anaty lisitra sy hampifandray ny lahatsoratra amin'ny gazety Danoà tsy mandoa ny vola mifanaraka amin'izany ny Google News ao Danemarka.
Bilaogera Danoa, Peter Svarre nanoratra, “AAAARRRRGH!” teo am-pamakiana fanehoan-kevitra manohitra ny Google News.
Tsy tena fantatro raha ao anatin'ny fahadisoam-panantenana na fahatezerana mivantana aho, fa taorian'ny namakiako lahatsoratra tao amin'ny Politiken, nahatsikaritra aho fa ny fampitam-baovao nentim-paharazana Danoà na farafaharatsiny ny biraon'ny tonian-dahatsoratry ny [gazety] Berlingske Tidende dia toa tsy nahalala na inona na inona sy tsy nianatra na inona na inona momba ny fivoarana amin'ny aterineto tao anatin'ny dimy taona farany. Toa miavaka, mampidi-doza sy mandrahona ny indostrian'ny Media Danoà ny hita fa toa rariny sy fahalalana mahazatra eo amin'ny fampahalalam-baovao sy ny mpanao dokam-barotra any New York.
Nisy fifandirana toy izany tany Belzika tamin'ny taona 2006-2007, raha nitory ny Google News tany amin'ny fitsarana ny gazety ary araka ny voalazan'ny Finfacts, nandrahona ny hanasazy azy ireo amin'ny onitra 1 tapitrisa euro isan'andro raha mbola mametraka rohy. Nisy ihany koa ny tranga taloha toy izany tany Danemarka. Tamin'ny taona 2002, nitory ny orinasan-tranonkala Danoà, Newsbooster tany amin'ny fitsarana ny Fikambanana Danoà Mpamoaka Gazety noho ny fandefasana rohin'ny lahatsoratra tany amin'ireo mpanjifany. Noterena hikatona ny Newsbooster
Bilaogera Ricco Førgaard ao amin'ny Fiskeben.dk [Da] nilaza tamin'ny volana Mey hoe:
Mazava fa tsy nahalala na inona na inona ireo antsoina hoe fampahalalam-baovao ireo ary tsy mbola nihoatra ny taona 1994. Tsy takatr'izy ireo fa ny fifamoivoizana ao amin'ny tranonkalany no hivarotra ireo dokambarotra (mahasosotra), izay heverina fa hamatsy vola ny vaovao.
Ao amin'ny Medieblogger, nanatsonga adihevitra tamin'ny mailaka vao haingana tao amin'ny lisitry ny Fikambanan'ny Danoà Mpamoaka Gazety (DONA) i Lars K Jensen, izay namalian'i Anne Louise Schelin, lehiben'ny mpanolotsaina ara-pitsarana an'ny Sendikan'ny mpanao gazety, ny fanontaniana momba ny fitsipika ofisialy amin'ny fitanisana sy fampisehoana/fakàna rohy.
Nanoro hevitra i Schelin, fa tsy tokony hampiseho rohy amin'ny zava-drehetra afa-tsy amin'ny pejy fandraisan'ny tranokala ihany izy ireo, eny fa na dia amin'ny mailaka ho an'ny mpiara-miasa momba ny lahatsoratra iray manokana aza. Ny singa tokana mahavonjy dia na heverina fa “atokisana” ny rohy, hoy izy, manondro ny raharaham-pitsarana Danoà nifampitorian'ny tranonkala roa misahana ny varotra tany sy trano tamin'ny taona 2006.
Tsy nanaiky mihitsy ny hafa tao amin'ny lisitry ny mailaka. Antsoin'ny olona hoe “tsy misy dikany amin'ny taranaka fax” izany. Namoaka ny valinteniny tao amin'ny bilaogy manokana Mediehack ny tonian-dahatsoratry ny bilaogin'ny gazety Politiken, Kim Elmose, miantso ny fanoherana ny fampisehoana rohy lalina ho tsy mampamokatra ary nanesoeso fa mampiasa Google News ho fitaovana ny ankamaroan'ireo mpanao gazety Danoà .
Lars K Jensen manontany ao amin'ny Medieblogger:
Navela aho tamin'ny fanontaniana. Inona no atao hoe rohy tsy-atokisana? Iza no mamaritra raha atokisana na tsy atokisana ny rohy iray?
Tsy rohy fotsiny ihany ve ny rohy?
* Avy amin'i Jacob Bøtter tao amin'ny Flickr ny sarin'ny gazety Danoà etsy ambony.